HR Giger သည် 'Scorn' Trailer ပါ၀င်သည့် ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်၊ Doug Bradley (Pinhead)
ပင်မစာမျက်နှာ	အားကစားပြိုင်ပွဲ	HR Giger သည် 'Scorn' Trailer ပါ၀င်သည့် ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်၊ Doug Bradley (Pinhead)
ငရဲပြည်ကို လည်ပတ်ဖို့ ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ။
by Trey Hilburn III ကို ဇြန္လ 16, 2022
by Trey Hilburn III ကို ဇြန္လ 16, 2022 7,607 အမြင်များ
Bethesda နှင့် Xbox ၏ပွဲကြီးပွဲကြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် အလှဆုံးကမ္ဘာများထဲမှတစ်ခုမှာ Kepler's world မှဖြစ်နိုင်သည် ။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း. HR Giger စိတ်အားတက်ကြွစေသော အိပ်မက်ဆိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယခင်က မမြင်ဖူးသည့် ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်နေပုံရသည်။ သံသယမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်အရှိဆုံးနှစ်တွင် ၎င်းသည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။ အသံပါရှိသော နောက်ဆုံးနမူနာကို မြင်သောအခါ ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို နှစ်ဆတိုးသွားသည်။ Hellraiser ရဲ့ Pinhead (Doug Bradley) သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ငရဲကမ္ဘာ၏ လှည့်စားမှုကို ပေးသည်။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း. Bradley ထက် ဝင်္ကပါကို လည်ပတ်ဖို့ ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ။
အတွက်အနှစ်ချုပ် ကဲ့ရဲ့ခြင်း ဤကဲ့သို့သောသွား:
ကစားသမားများသည် Scorn ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်သည့် ဝင်္ကပါအတွင်းမှ အထီးကျန်ဆန်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသည်ကို နိုးထလာသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အတွက် ခုခံကာကွယ်ရန်နှင့် ရှေ့ဆက်ရန် နည်းလမ်းရှာရန် ကျန်နေပါသည်။ အမြှေးပါး၊ အမဲစက်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ဝန်းရံထားပြီး သေစေတတ်သော ထိတွေ့မှုတိုင်းကို ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အရင်းအမြစ်များဖြင့် ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကမ္ဘာကြီး၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ကစားသမားများသည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော အဖြေများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်တည်မှုကို ဖြည်းညှင်းစွာ နားလည်လာစေရန် အနုစိတ်ပဟေဋ္ဌိများကို ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်သည်။
ပထမလူက အဲဒါကို တွေ့ကြုံရတယ်။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း Xbox နှင့် PC တို့အား မယုံနိုင်လောက်အောင် လှသည်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးအားလုံးရဲ့ ရေဒါမှာ ရှိနေရမယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် Horror Fan တွေ အားလုံး Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ ဤဂိမ်းသည် ထက်မြက်ပုံရပြီး ၎င်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန် ထိုက်တန်သည်။
ကဲ့ရဲ့ခြင်း အောက်တိုဘာလ 21 ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Scorn အားလုံး၏ အကောင်းဆုံးကို Xbox Game Pass စာရင်းသွင်းသူများအတွက် နေ့တွင် အခမဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ PC မှာလည်း ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။